Samachar Batika || News from Nepal » ‘म’ अ’पाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नियमित से’क्स गर्ने गरेकी छु !
‘म’ अ’पाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नियमित से’क्स गर्ने गरेकी छु !
काठमाडौं । इरानमा करिब एक करोड मानिस कुनै न कुनै अ’पाङ्गताबाट ग्रस्त छन् । रुढीवादी देश इरानमा से क्स जस्तो विषयमा कुरा गर्न व’र्जित छ । यस्तोमा अ’पाङ्गता भएका महिलाको विषयमा से’क्सबारे सोच्न पनि सकिँदैन । उत्तरी इरानको एउटा सानो गाउँमा बस्ने ४१ वर्षकी अ’पाङ्गता भएकी महिला मितरा फराजदाहले आफ्नो अनुभव र निराशाबारे कुरा गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘म एक महिला हुँ । म एउटा यस्ती महिला हुँ जो ७५ प्रतिशत शारिरिक अपा’ङ्गताबाट ग्र’स्त छु ।
‘केही वर्षसम्म त जिन्दगी न’रक जस्तो भयो तर उनको प्रेमले मलाई आफूलाई नै प्रेम गर्न सिकायो ।’ ‘ती व्यक्तिसँग मैले ३० वर्षसम्म प्रेम गरेँ । यद्यपी, हामी कहिले पनि सँगै बसेनौं । म एक महिला हुँ जसलाई ती सबै कुराको आवश्यकता पर्छ जो एक महिलालाई हुन्छ ।’
से क्स आवश्यकता : मितरालाई उनका प्रेमीले अँ’गालोमा बाँधुन् र उनको कपाल खेलाउन् भन्ने चाहना छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै मानिसहरु छन् जसले सोच्छन् कि हामीजस्तो महिला प्रेमको लायक नै छैनन् । यो सुन्दा मलाई पी’डा हुन्छ ।’
उनी भन्छिन्, ‘म जसलाई प्रेम गर्छु, उनीसँग बस्न मेरा पिताले अनुमती दिँदैनन् । म जस्तै थुप्रै महिला यौ न र भावनात्मक आवश्यकतालाई द’बाएका कारण पीडित छन् ।’
यौ न आवश्यकता पूरा नहुनु हा’निकारक : मितरालाई आफ्नो भावना र आवश्यकतालाई जाहिर गर्न पाउँदा गर्व भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि धेरै मानिसहरु यो कुरामा विश्वास गर्छन् कि अ’पाङ्ग महिलाले आफ्नो यौ’न र भावनात्मक आवश्यकता व्यक्त गर्नु हुँदैन तर सत्य भने फरक छ ।’
अ’पाङ्गता भएका मानिसहरुको यौ ”न ऊर्जा सामान्य मानिसभन्दा धेरै हुने मितरा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘म जस्तो व्यक्तिका लागि यो सम्भव छैन किनभने मलाई ग’म्भीर शा’रिरिक अ’पाङ्गता छ ।’ मितरा भन्छिन्, ‘यदि अ’पाङ्गता भएका महिलाको यौ न आवश्यकता पूरा भएन भने यो निकै हा’निकारक हुनसक्छ ।’ बीबीसी
प्रकाशित मिति २९ असार २०७७, सोमबार १६:०५